Wararka - isticmaalka kaalshiyamka propionate
Calcium propanoate ama kaalshiyamka propionatewuxuu leeyahay qaaciddada Ca (C2H5COO) 2. Waa cusbada kalsiyum ee propanoic acid.
Cuntada lagu daro, waxay ku qoran tahay lambarka E 282 ee Codex Alimentarius. Kaalshiyamka propionate -ka waxaa loo adeegsadaa ka -ilaaliye wax -soo -saarka kala duwan, oo ay ka mid yihiin: roodhida, badeecadaha kale ee la dubay, hilibka la warshadeeyay, caanaha, iyo waxyaabaha kale ee caanaha laga sameeyo.  Beeraha, waxaa loo adeegsadaa, waxyaabo kale, si looga hortago qandhada caanaha ee lo'da iyo kaalmada quudinta.  Propionates waxay ka hortagtaa microbes inay soo saaraan tamarta ay u baahan yihiin, sida benzoates -ka. Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan benzoates, propionate -ku uma baahna jawi acid ah. 
Kaalshiyamka propionate waxaa loo adeegsadaa alaabta wax lagu dubo sida ka hortaga caaryada, sida caadiga ah 0.1-0.4%  (in kasta oo quudinta xayawaanka ay ku jiri karto ilaa 1%). Faddaraynta caaryada waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dhibaato halis ah oo ka dhexaysa roodhida, iyo xaaladaha sida caadiga ah laga helo dubista ayaa hadda ku sugan xaalado ugu habboon koritaanka caaryada. 
Dhowr iyo toban sano ka hor, Bacillus mesentericus (xadhig), waxay ahayd dhibaato halis ah,  laakiin maanta hababka fayadhowrka ee roodhida oo la hagaajiyay, oo ay weheliso wareejin degdeg ah oo badeecadda la dhammeeyey, ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray qaabkan xumaanshaha. propionate iyo propionate sodium waxay wax ku ool u yihiin labadaba B. xadhigga mesentericus iyo caaryada. 
Dheef-shiid kiimikaadka propionate wuxuu ka bilaabmaa u beddelidda propionyl coenzyme A (propionyl-CoA), tallaabada ugu horreysa ee caadiga ah ee dheef-shiid kiimikaadka carboxylic. Maadaama propanoic acid leedahay saddex carbons, propionyl-CoA si toos ah uma geli karto oksaydhka beta ama wareegyada citric acid. Inta badan laf-dhabarta, propionyl-CoA waxaa lagu carboxylated D-methylmalonyl-CoA, taas oo loo-malaynayo L-methylmalonyl-CoA. Faytamiin B12-ku-tiirsanaanta enzyme wuxuu kiciyaa dib-u-habeynta L-methylmalonyl-CoA ilaa succinyl-CoA, oo ah meel dhexe oo ka mid ah wareegga citric acid oo si fudud loogu dari karo halkaas.
Carruurta waxaa lagu xujeeyay kalsiyum propionate ama placebo iyada oo loo marayo rooti maalinle ah tijaabo isgoys laba -indho -indho -indhayn ah. In kasta oo aysan jirin farqi weyn oo u dhexeeya laba tallaabo, farqi tirakoob ahaan aad u weyn ayaa laga helay saamiga carruurta dabeecaddoodu “ka sii dartay” oo caqabad ku ah (52%), marka la barbardhigo saamiga ay dabeecaddooda “hagaagtay” ee caqabad ku noqotay (19%). [ 9] Markii ay si toos ah u gashay propanoic acid maskaxda jiirka, waxay soo saartay isbeddel dabeecadeed oo la beddeli karo (tusaale, kacsanaan, dystonia, naafonimo bulsheed, adkeysi) iyo isbeddel maskaxeed (tusaale.
Kaalshiyamka propionate waxaa loo isticmaali karaa sida fungicide miraha. 
Daraasad 1973 ay soo werisay EPA, maamulka biyaha ka dhasha 180 ppm ee kalsiyum propionate ayaa la ogaaday in ay waxoogaa sun ku tahay kalluunka cadceedka. 
Mamnuucidda [wax ka bedel]
Calcium propanoate ayaa laga mamnuucay dalal gaar ah sida Ruushka sababo la xiriira xasaasiyad gaar ah iyo dibbiro. 
Waqtiga dhejinta: Jul-20-2021